Sida loo codsado magangalyada - Migrationsverket
Sida loo codsado magangalyada
Så här ansöker du om asyl – somaliska
Haddii aad rabtid in aad ka codsatid magangalyada Sweden waxaad u baahantahay in aad aadid Wakaalada Socdaalka si aad u siisid codsigaaga. Suurtogal ma ahan in aad codsatid magangalyada ka hor inta aadan tagin Sweden.
Haddii aad la kulantid booliska xaduudka marka aad galeysid Sweden waa in aad u sheegtaa iyaga in aad rabtid in aad codsatid magangalyada. Waxaa jiro booliska xadka tusaale barta hubin baasaboorka ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah, dekadaha iyo halka tareenada iyo basaska ka soo galaan Sweden. Booliska xaduudka ayaa ku weydiinayo su'aalaha qaar iyo kadib wuxuu kuu gudbinayaa Wakaalada Socdaalka, halka aad ku gudbineysid codsigaaga magangalyada.
Haddii aad adigu wadanka Iswiidhan hore u joogtay waxaad la soo xiriiraysaa Hay’adda laanta socdaalka. Waxaad arjigaaga qaxootinimada u dgeysanaysaa qaybaha arjiyada qaabilsan ee Hay’adda laanta socdaalku leedahay ee ku kala yaala Göteborg, Malmö ama Stockholm.
Halka laga helo qeybaha Hay'ada Socdaalka ee Magangalyada (oo af ingiriis)
Wakaa­lada Socdaalka ayaa ka diiwaange­li­neyso codsi­gaaga
marka aad codsatid magangalyo waa in aad sheegtaa qofka aad tahay, sababta aad u rabtid in aad codsatid magangalyada iyo sida aad ugu safardtid Sweden.
Waa khasab inaad noo sheegto qofka aad tahay
Haddii aad haysatid baasaboor ama waraaqaha aqoonsiga kale waa in aad u dhiibtaa iyaga si ay u cadeeyaan aqoonsigaaga: waxa magacaaga yahay, goorta aad dhalatay iyo wadanka aad muwaadin ka tahay. Waa muhiim in aad tustid aqoonsigaaga si markaas Wakaalada Socdaalka ay ugu suurtogasho in ay gaadhaan go'aanka saxda.
Haddii aysan kuu suurtogaleynin in aad dhiibtid wax waraaqaha aqoonsiga ah waa in aad isku daydaa in aad ku caddeysid qofka aad tahay qaab kale. Tani waxaad ku sameyn kartaa, tusaale ahaan, shahaadada dhalashadaada, waraaqaha qoyska ama diiwaanka milatariga ama shahaadada guurka. Waraaqo noocaas ah si gaar ahaan uma cadeyso aqoonsigaaga, laakin mararka qaar dhoor waraaqo wadajir ah ayaa loo ogolaadaa sida cadeynta aqoonsigaaga.
Akhriso warbixin intaa ka badan sababta aad u sheegayso qofka aad tahay
Wakaalada Socdaalka ayaa kuu diiwaangelineysa sida magangalyo doon iyaga oo isticmaalaya magaca iyo macluumaadkakale ee lagu sheegay waraaqaha aqoonsigaaga. Tani waxay la micna noqon kartaa, tusaale ahaan, in dadka sinjigooda beddela waxay ku diiwaangashanyihiin magaca iyo jinsiga ee loogu qorsheeyay dhalasha. Nasiib daro, sharciga Swedish manoo ogolaanayo inaga in aan kaa diiwaangelino magac kale, laakiin haddii aad rabtid in aad isticmaashid magac kale oo koowaad ama magac u yaal waa in aad noo sheegtaa, oo waan qoraynaa tan. Sidoo kale waa fikrad wanaagsan haddii aad noogu sheegtid heerkaan haddii aad qabtid sababo gaar ah ee aad u rabtid turjubaan, la talin ama baare jinsiga gaarka ah, ama haddii aadan rabin in aad ku wadaagtid qolka ay ku jiraan magangalya doonada kale ee jinsiga gaarka ah.
Waa lagu sawi­rayaa oo farahaa lagaa qaadayaa
Markii aad codsatid magangalya doon waa lagu sawirayaa oo faraha ayaa lagaa qaadayaa. Sawirkaaga waxaa lagu darayaa diiwaanka Wakaalada Socdaalka iyo waxaa loo isticmaalayaa kaarka Magangalya Doonka (kaarka-LMA) waxaad heleysaa sidii caddayn in aad tahay magangalya doon. Carruurta ka yar da'da lix looma baahno in laga qaado farahooda.
Faraha waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo haddii aad ka codsatay magangalyo wadan Schengen ah iyo haddii aad leedahay oggolaanshaha daganaanshaha ama mamnuucida ee wadan walboo Schengen. Haddii hubinta faraha ay muujiso in lagaa diiwaangeliyay wadan kale ee wadadaada Sweden, ama aad mar hore ka codsatay magangalyo wadan kale, Wakaalada Socdaalka ayaa go'aansaneyso wadanka ah in uu baaro codsigaaga ee magangalyada. Go'aaminta midan, Sharciga EU Dublin ayaa la isticmaalayaa.
Ma jiraan hubinta faraha oo lagu fulinayo carruurta ka yar da'da 14.
Markii lagu sawiro oo faraha lagaa qaaday waxaad la kulmeysaa baare. Caawimada turjubaankana waxaad ku sharaxaysaa qofka aad tahay, sababta aad uga soo tagtay wadankaaga iyo sida aad ku soo gashay Sweden. Waxaa sidoo kale lagu weydiinayaa qoyskaaga iyo caafimaadkaaga.
Haddii aad leedahay naafanimo, micnaheeda tahay in ay kartidaada shaqada jirka ay hoos u dhacday, maskax ahaan ama caqli ahaan, waa in aad u sheegtaa Wakaalada Socdaalka. Haddii dhibaatada naafanimadaada say kugu adkeyso adiga la xiriirka Wakaalada Socdaalka marka aad codsaneysid magangalyo, waxaad xaq u leedahay in aad caawimo hesho. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay hoyga lagu ansixiyay baahiyadaada.
Waxaa lagu siinayaamacluumaadka ku saabsan nidaamka socdaalka – waxa tallaabada soo socotaa ay tahay waxa aad u baahantahay in aad sameysid. Waxaad sidoo kale heleysaa macluumaad ku saabsan arrimaha dhabta ah sida xaquuqdaada hoyga, taageerada dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka iyo waxbarasha carruurtaada.
Waa in aad markii koowaad isku daydaa in aad taageertid nafsadaada dhaqaala ahaan adiga oo sugayo go'aanka. Haddii aadan heleynin wax lacag ah ama aadan laheyn wax kale oo hanti ah, waxaad ka codsan kartaa taageerada dhaqaalaha Wakaalada Socdaalka.
Markii dambe waxaa laguugu yeerayaa baaritaanka magangalyada taas oo aad noo sheegeysid wax badan oo adiga kuugu saabsan sababta aad u soo qaxday iyo waxa aad u maleysay in ay kugu dhacayo haddii ay tahay in aad laabatid.
Si cad codsi sabab la’aan ah
Haddii si cad aysan u jirin wax sababo ah ee laguu siiyo magangalyo, baaraha wuxuu sharaxayo in Wakaalada Socdaalka aanay tixgelinayn in aad leedahay wax sababo ah ee magangalyada, iyo in go'aan laguugu sameynayo dhowr todobaad gudahood. Haddii aadan laheyn sababo sax ah gabi ahaanba ee magangalyada waxaad heleysaa go'aanka diidmada galitaanka oo markaas dhaqan gelaya.
Akhri wax badan oo ku saabsan waxa ay la micna tahay in aad heshid go'aanka diidmada ah ee gelitaanka oo markaas dhaqan gelaya
Markii aad soo dhiibtid codsi­gaaga
Baaraha ayaa dulmaraya waraaqahaaaga, waxa aad u sheegtay Wakaalada Socdaalka iyo waxa hubinta farahaaga muujiyeen. Baaraha ayaa go'aansanaya, sida ku saleysan macluumaadka aad sheegtay, baaxada baaritaanka looga baahanyahay dacwadaada. Dhammaan codsiyada way kala duwanyihiin iyo sidaas darteeda u baahanyihiin tiro kala duwan ee baaritaanka ah.
Baaraha wuxuu diyaarinayaa codsigaaga oo baaritaanka joogtada ah. Tani waxaa ku jiri kara sida waxyaabaha qaar ee helitaanka macluumaadka ee ka imaanaya wakaaladaha dowlada. Haddii aad u baahantahay in aad kordhisid codsiyadaada, baaraha ayaa kula soo xiriirayo. Kordhinta noocaas ah laga yaabo, tusaale ahaan, in loo baahdo haddii aadan ku sheegin wax waraaqaha aqoonsiga ee cosdigaaga.
Sug inta inter­fiyuuga laguugu yeerayo
Haddii arjigaaga magageyodoonka ah ay Iswiidhan go’aan ka gaarayso waa inaad markaa sugto inta ay Hay’adda laanta socdaalku eegayso inaad xaq u leedahay in sharciga deggenaanshaha lagu siiyo.
Waxay qaadankartaa wakhti dheer ilaa iyo inta laguugu yeerayo in interfiyuu lagaa qaado. Markaa waxaad ka sheekayndoontaa sababta aad Iswiidhan isaga dhiibayso, waxaad sheegidoontaa wixii kugu soo dhacay markaad wadankaagii joogatay iyo waxa aad u malaynayso inay kugu dhacayaan haddii aad wadankaagii dib ugu noqoto. Wakhitiga lsugitaanka dadku way ku kala duwanaankaraan.
Waxa adiga laguugu yeerikaraa shirar badan intaan go’aan lagu siinin. Kaalay wakhtiyada ballamaha ee ay Hay’adda laanta socdaalku kuu qabatay. Wakhti cusub in laguu qabtaa way adag tahay sidaas daraadeed wakhti dheer ayay qaadanaysaa in marka go’aanka laguu sheegayo wakhti kale dib markale laguugu qabto
Haddii aad haysato sharci ku meelgaar ah oo aad doonayso inaad Iswiidhan sii joogto waa inaad dheeraysato sharcigaaga intaanu kaa dhicin. Waa laguu dheeraynayaa sharciga haddii aad weli u baahan tahay ilaalin/gabaad. Waxa kale oo sharciga deggenaanshaha lagugu siinkaraa haddii aad haysato sabab aad Iswiidhan ku joogto
Akhriso warbixin intaa ka badan sida aad sharciga deggenaanshaha u dheeraysanayso (oo af ingiriis)